Shina lozisialy Fantsona Kinzon50 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Ny varavarankelin'ny fantsom-boasary -Kinzon50 dia fisolelaka vaovao ary mihodina ny rafitra miaraka amin'ny rindrina. Io varavarankely io dia ahafahan'ny takelaka mirazotra vita amin'ny alàlan'ny lafiny iray na amin'ny andaniny roa. Varavarankely misy balkomaly -Kinzon50 afaka mampiasa fitaratra 5 + 9A + 5 fitaratra na vera 8mm. Ary ny varavarankelin'ny fantsom-baravarankely dia manana mombamomba ny sisiny manokana miaraka amin'ny hidim-baravarana izay tsy afaka mampisy elanelana eo amin'ny takelaka fitaratra. Ny halavam-baravarankely lava be dia be ny Kinzon50 dia 650mm ary ny haavon'ny ambony dia 2000mm isaky ny tontonana fitaratra. Feo malefaka, ambany ambany, hafanana ary mangatsiatsiaka miolakolaka.
Ny mampiavaka ny varavarankely misy ny vavahadin-tserasera Kinzon50 mahatonga ny fanadiovana ny varavarankely mora be dia be, azonao atao ny manadio ny fiverenana sy fehiloha isaky ny takonana fitaratra. Ny fantsom-baravarankely amam-baravarankely izay toa Kinzon50 dia toa fantsom-baravarankely mangarahara, izay tsy vitan'ny hoe manimba ny endrika sy ny toeran'ny tranobe, fa koa miteraka tombony amin'ny hatsaran'ny fantsom-baravarankely. amin'ny mombamomba ny fitaratra mba tsy handratra. Ny fiarovana dia toa ny tohatra ary ny tombo-kase dia tsara kokoa.Tsy misy elanelana misy ny mombamomba ny lalana sy ny fitaratra fitaratra. Varavarankely fantsom-boasary -Kinzon50 tsy misy hantsana eo anelanelan'ny takelaka fitaratra voalohany sy farany miaraka amin'ny mombamomba ny lafiny lafiny.Ny varavarankely tsizarizary -Kinzon50 nampiasa kodiarana lehibe mitondra kodiarana mba hivezivezy tsara i Panes.
Ny traikefa dia mitovy amin'ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Ny varavarankelin'ny balkon -Kinzon50 dia manana mpanjifa afa-po tapitrisa tapitrisa avy amin'ny firenena 40 sy traikefa 20 taona. Ny varavarankelin'ny serasera -Kinzon50 dia mikarakara ny dingana rehetra amin'ny fizotrany, tohanan'ny fahalalana sy ny traikefa azo avy amin'ny fikarohana sy fananganana vokatra roa taona.
varavarankely hazo amam-baravarana aluminium
Fitaratra iray na Roa tokana
Afo / tariby tariby
Sash varavarana hidy / am-baravarana
Previous: Rafitra Famoronana balkona Kinzon09
Manaraka: Rafitra Famoronana balkonina Kinzon06